I-Oppo Reno 2 ivele yaqinisekiswa ngemifanekiso yayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha | I-Androidsis
I-Oppo Reno 2 ibonakele iqinisekisiwe ngemifanekiso yayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha
Kungekudala, i-Oppo Reno 2 ivuze kwindawo yedatha ye-TENAA njengesiqingatha sendlela eqinisekisiweyo yesiqhwala. Esi sixhobo siya kubonelelwa nge iimodeli ezintathu ezahlukeneyo, njengoko kutyhilwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ukongeza, sele inefayile ye- umhla wokukhutshwa ngokusemthethweni, engaphaya kweveki kude.
I-arhente yokuqinisekisa yaseTshayina i-TENAA inayo uhlaziye uluhlu lweempawu kunye neenkcukacha zobugcisa zesi sixhobo, ebonakala iyimodeli esembindini, kunye nemifanekiso yayo, ngoku ke singafumana umbono ocacileyo kunye noqinisekisiweyo wento asigcinele yona umvelisi ngolu hlobo.
Uthotho lwe-Oppo Reno 2 luya kugxila kwicandelo lokufota, ngokwale nto ityhilwe yinkampani kwezi ntsuku. I-TENAA isixelela ukuba i-Reno 2 iza kuza ixhotyiswe ngenkqubo yekhamera ye-quad engemva eza kufika kunye ne-MP eyi-MP eyi-sensor yokuqala edityaniswe nge-48 MP ye-lens yefowuni ene-13X zoom zoom, i-2 MP ye-wide-wide-angle sensor kunye ne-sensor enzulu ye-8 MP. Ngokubhekisele kwikhamera yangaphambili, kuyakubakho i-2-megapixel resolution resolution shooter. Indawo ekuyo kule modyuli yekhamera inokuqinisekiswa yimifanekiso esiyixhoma apha ngezantsi.
El phakathi kuluhlu ufumane imvume nge-2.2GHz octa-core processor, Imemori ye-RAM ye-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB okanye i-256 GB yokugcina -yandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB-. Isikrini esisixhobisayo zii-intshi ze-6.5 kwaye isisombululo sayo yi-FullHD + ye-2,400 1,080 x 20 pixels (9: XNUMX).
I-OPPO Reno 2 ikwenze yacaca ukuba iqhuba i-Android 9, kunye nokuthwala iskena sokubonisa ngeminwe kunye nebhetri ye-3,915 mAh phantsi kwehod. Uluhlu lwe-TENAA luthi luya kufumaneka ngombala omnyama, opinki kunye nohlaza. Ubukhulu bayo bunikwa njenge-160 x 74,3 x 9,5 yeemilimitha kwaye ubunzima bayo zii-189 gram.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo Reno 2 ibonakele iqinisekisiwe ngemifanekiso yayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha
Iifoto zikaGoogle ziya kufaka imibala kwiifoto ezindala ngombala omnyama nomhlophe